आठ वर्षमै ब्ल्याक बेल्ट (फोटोफिचर/भिडियो) « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
« Two Young World Class Girls’ Popular Songs
गोरखामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य : आलोकश्री ( सङ्गीतकार ) »
‘चार वर्षको उमेरदेखि निरन्तर रूपमा कराँतेको प्रशिक्षण लिँदै आएको छु, विशांक भन्छन्। कराँते खेलप्रतिको लगावका कारण उनको दैनिकी भने निकै व्यस्त बनेको रहेछ। खेल र अध्ययनप्रतिको तादात्म्य मिलाउन उनले परिश्रम पनि उत्तिकै गर्नुपरेको छ।
‘बिहानै उठेर प्रशिक्षण लिन जान्छु, त्यहाँबाट फर्किएर स्कुल जान्छु। स्कुल सकिएपछि ट्युसन पढ्छु अनि साँझमा फेरि कराँतेको प्रशिक्षण लिन्छु’, उनले आफ्नो दैनिक सुनाए। हो, कडा अनुशासन र बलियो इच्छा शक्ति भए संसारमा हासिल गर्न नसकिने उपलब्धि केही छैन, विशांक यसैको सशक्त उदाहरण हुन्।
विशांकका बुवा विनोद पनि कराँतेकै खेलाडी भएकाले सानै उमेरदेखि यो खेलसँग उनको नाता गाँसिएको रहेछ। कराँतेका चौथो डान विनोद अहिले जापान कराँते डो जोगुरियो ओसिकाई संघ नेपालका प्रशिक्षक हुन्। विशांकलाई कराँतेमा निपुण बनाउन अन्य प्रशिक्षकसँगै उनको बुवाको पनि ठूलो हात छ।
‘म खेलाडी भएकाले दुई/तीन वर्षको उमेरदेखि नै विशांकलाई पनि विभिन्न प्रतियोगिता र प्रशिक्षणमा लिएर जाने गरेको थिएँ। त्यसैले होला, कराँते खेलमा उसको मन बसेछ।
निकै जिद्दी गरेपछि चार वर्षको उमेरदेखि नै उसलाई प्रशिक्षणका लागि भर्ना गरिदियौं’, विनोद भन्छन्, ‘अन्तत: कराँते खेलप्रतिको यही आशक्तिका कारण नै ऊ आठ वर्षको कलिलो उमेरमै ब्ल्याक बेल्टसम्म पुग्न सफल भयो।’
विभिन्न स्तरका थुप्रै प्रतियोगितामा पदकसमेत जितिसकेका विशांकले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेर राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने सपना बुनेका छन्।
‘अझ कडा परिश्रम गरेर भविष्यमा देशलाई बढीभन्दा बढी पदक दिलाउन चाहन्छु’, उनी भविष्यको योजना सुनाउँछन्। कराँतेभित्रका दुई विधामध्ये कुमुतेभन्दा पनि कातामा आफू बढी रमाउने गरेको उनले बताए।
प्रशिक्षणका क्रममा एक दिन उनको भेट अनिलसँग भएछ। अनिलले पनि उनलाई फुटबल खेल्न र भविष्यमा राम्रो खेलाडी बन्न सुझाव दिएछन्। त्यसपछि त के चाहियो र! दिनरात फुटबलकै मात्र कुरा गर्न थालेछन् घरमा।
राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिएर पदकसमेत जिते पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताको अनुभव बटुल्ने अवसर भने उनले हालसम्म पाएका छैनन्।
पछिल्लोपटक उनले गत जुलाईमा राजधानीमै सम्पन्न छैटौं राष्ट्रिय गोजुरियो ओसिकाई कराँते प्रतियोगिताको कुमुते २० केजी तौलसमूहमा स्वर्ण पदक जितेका थिए। ‘अहिले सानै भएकाले प्रतियोगितामा भाग लिन टाढा पठाउन मनले मान्दैन’, आमा शान्ति भन्छिन्। खेलसँगै विशांक अध्ययनमा पनि राम्रो रहेको उनले बताइन्।
विद्यालयस्तरका प्रतियोगितामा राम्रो खेलाडीमा गनिने विशांकले आफ्नै कक्षामा पढ्ने दुई छात्रा सुलोभिका अधिकारी र लुनिभा तुलाधरले पनि कराँतेको ब्ल्याक बेल्ट पाएको जानकारी दिए। ‘सुलोभिका र लुनिभा पनि ब्ल्याक बेल्ट हुन्। लुनिभाले त राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक पनि जितेकी थिइन्’, उनी भन्छन्।
कराँतेका उदीयमान खेलाडी भए पनि पछिल्लो समयमा आएर फुटबल खेलले पनि विशांकलाई मोहित पारेको छ रे। फुटबल खेलले उनको मन तान्नुको पछाडि कारण भने रहेछन्, राष्ट्रिय फुटबल टोलीका चर्चित खेलाडी अनिल गुरुङ।
‘अनिल गुरुङसँग भेट हुँदा उनले फुटबल खेलाडी बन्ने सुझाव दिएछन्। त्यसपछि त जतिबेला पनि फुटबलकै कुरा गर्छ। कराँते पनि नछाड्ने अनि फुटबल पनि सिक्ने रे। अनिललाई भेटेपछि अहिले फुटबलप्रति एकोहोरिएको छ’, आमा शान्ति भन्छिन्।
बुवा विनोद भने अध्ययनलाई असर नपर्ने गरी उनले जुन खेल खेले पनि आफूहरूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँछन्। ‘कुन खेल खेल्ने उसको विचार हो, हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर अहिले अध्ययन नै उसको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ’, यस्तै छ आफ्नो छोराप्रति बुवा विनोदको धारणा।
जापान कराँते डो जोगुरियो ओसिकाई संघ नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक ओमकृष्ण प्रसाई पनि विशांकको खेलबाट प्रभावित रहेछन्। ‘म विशांकलाई राम्ररी चिन्छु। धेरै पटक उसको खेल पनि हेरेको छु। खेललाई निरन्तरता दिन सक्यो भने भविष्यमा राम्रो खेलाडी बन्न सक्ने क्षमता उसमा छ’, ओमकृष्ण भन्छन्।
This entry was posted on January 10, 2015 at 7:01 pm	and is filed under Article. Tagged: Bishank Rana, Mark Garry, youngest person to acheive Karate Black belt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.